Ụbọchị My Pet » Olee Otú Ị Pụrụ ntụpọ a adịgboroja Online dịwara Profaịlụ?
emelitere ikpeazụ: Dec. 03 2020 | 3 min agụ
“Olee otú ị maara na profaịlụ bụ n'ezie na ọ bụghị ihe mere na ị na-esonyere ndị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị? M ga nza nke ozi ịntanetị site na a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị otú ahụ ka m ga-eso ya, na mgbe ahụ ozi ịntanetị dị nnọọ kwụsị. Gịnị bụ na na?”
Iji zere online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị scams, gị mma nzọ bụ na-arapara na isi online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na ndidi na gburugburu n'ihi na a afọ ole na ole nwere nnukwu so isi. Ha agaghị ekweta na ọ, ma m n'onwe m na hụrụ ụfọdụ n'ime nta ma ọ bụ ọzọ aguliteghi mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị 'na mpe mpe akwa’ na website na adịgboroja profaịlụ na ọbụna na-aga dị ka izipu ozi na ndị òtù ha site na nke a 'adịgboroja’ onye na-enwe olileanya nke na-amụba ihe ọrụ na saịtị.
The ibu, ihe a maara nke ọma mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị enweghị ihe mere ime nke a na n'ozuzu nwere ọrụ nke ọrụ ya bụ inyocha na ịchọpụtakwa ọhụrụ ndekọ na ahihia nke spammers na scammers. Ikpọ saịtị nwekwara a ọha image iji chebe, nke na-arụ ọrụ gị amara. Ọ bụrụ na ị na-enyo onye nke ịbụ a spammer ma ọ bụ scammer, jide n'aka na ị na-akọ ha ozugbo ka website nkwado otu.
N'ihi gịnị ka ozi kwụsị mgbe unu sonyere?
E nwere nile di iche iche nke ihe ndị mere na onye dị adị ghara-aza gị ozi na ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ọ bụla na-eme gị onwe gị. Ma eleghị anya, ha nwetara n'ezie-arụsi ọrụ ike, ekpe obodo na oge ezumike, ma ọ bụ kpebiri na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ nnọọ ha ihe. Ihe dị mkpa ebe a na-adịghị na-mbà. E nwere nza ọzọ azụ n'ime oké osimiri.
M ga-ikwu na-agbalị iji zipu a ole na ole ozi n'elu N'ezie nke a izu ole na ole tupu ị na-ekpebi nye elu kpamkpam. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị ka na-adịghị ebe ọ bụla, gaa ihu.
E nwere ọnọdụ ebe onye Izi ozi ị nwere ike ịbụ a scammer agbalị ịkpọtụrụ gị maka ihe ọ bụla mere. Ihe ndekọ ndị a na-achọta ma kwụsị ngwa ngwa na ndị isi mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị. Ya mere, site na oge ị ikwu, na akaụntụ nwere ike anọwo na-ehichapụ.
I nwekwara ike nweta a wink si a girl onye bụ onye n'ezie a na-akwụ ụgwọ so na saịtị. Ọ bụrụ na ị atụkwasịrị ozi ya na ọ gaghị enwe ike ikwu ọ gwụla ma o paysÖ na ọ gaghị enwe njikere ime na. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe njikere iji kwụọ ụgwọ ịgwa gị, mgbe ahụ, ọ bụghị ihe kwesịrị oge gị na agbanyeghị. Bugharịa on na-esonụ mara mma nwa agbọghọ gị na ndepụta.
Red flags. Olee otú ị pụrụ isi mara ndị ezigbo mmadụ si scammers?
“Red flags” na-kọwaa dị ka ndị na obere ihe na ị nwere ike lee n'ihi na a onye profaịlụ na-egosi na profaịlụ nwere ike ịbụ adịgboroja. Ọ bụ ezie na e nwere n'ezie ọ dịghị ụzọ mara n'ezie ma ọ bụrụ na a na profaịlụ bụ n'ezie ma ọ bụ adịgboroja, e nwere ụfọdụ red flags na i kwesịrị lezienụ anya maka.
Lee ihe atụ ụfọdụ nke ihe m na-ekwu mgbe m na-ekwu “red flags”.
– Onye na-akpọ gị ka ị chọpụta ya ma ọ bụ ya na a dị iche iche website. Nke a nwere ike ka na-enwe a n'ezie profaịlụ, ma ọ nwere ike na-abụ onye na òkù debanyere a porn saịtị.
– Ọ bụrụ na nwaanyị na ị hụtụbeghị, na-eziga gị ozi na-bụ nnọọ na-atụ na flirty, o nwere ike ịbụ nnọọ a porn nlereanya ma ọ bụ cam girl agbalị ịraba gị ya na saịtị, ma ọ bụ a na-agba akwụna na-achọ ka ndị ahịa na-.
– A n'ezie oké achọ Ihọd ma ọ bụ nwa agbọghọ (anyị na-na-ekwu okwu ibu nlereanya àgwà) na-eziga gị a ozi n'agbanyeghị na unu na-adịghị ọbụna uploaded a foto ma ọ bụ dejupụtara profaịlụ gị.
– The ụtọ asụsụ na profaịlụ dị nnọọ ogbenye mma na-ada mba ọzọ. E nwere ọtụtụ a spammers, mgbe mgbe malite mgbe Russia na Nigeria (na ọtụtụ ndị ọzọ ebe), na kpọmkwem nwaa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na netwọk saịtị, dị ka myspace na Friendster.
– Ọ bụrụ na mmadụ choo onwe gị ozi dị ka nọmba ekwentị, adreesị, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ụdị onye ọ bụ ego ọmụma, Ha pụrụ ịbụ nnọọ na iji mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na-anakọta ozi na-eji ihe e ji amata na-ezu ohi ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ fraudulent ojoro.
– Ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla, onye ma ọ bụ ozi yiri 'ihe ọma na-ezi', nke a kwesịrị ịgba gị ume ịkpachara anya.
Ana m ekwu na i kwesịrị mgbe zaghachi ozi ndị na-ezute ndị a ibiere, ma ọ bụrụ na ị na-eme, ịkpachara anya!
Ị ga-abụ ezi ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ eji nkịtị uche. Cheta, online ma ọ bụ, ata ụwa iwu ka itinye.